Fizahantany Sri Lankey : Miroborobo Indray, Fa Fehezin’ny Miaramila Ny Ankamaroany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Oktobra 2016 5:31 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, বাংলা, Français, 繁體中文, 简体中文, English
Tongotra hazo fanjonoana amin'ny hazavana harivariva—fisarihana mpizahantany tsy manam-paharoa ao Sri Lanka. Sarin'i Thomas Keller avy amin'ny Flickr. BY-NC-ND 2.0
Toerana tian'ny mpizahantany nandritra ny taonjato maro i Sri Lanka, ary loharanom-pidiram-bola lehibe sy mpitarika ny toe-karena ao an-toerana ny fizahantany. Mazava ho azy fa namotika ny fizahantany tao amin'ny ny firenena ary mbola mampikatso ny orinasa ny Ady Antrano tao Sri Lanka nandritra ny 25 taona mahery izay nifarana tamin'ny 2009.
Niroborobo haingana ny fizahantany hatramin'ny niafaran'ny ady, na izany aza. Anisan'ireo fampandrosoana vaovao maro ny fametrahana tetikasa fampandrosoana fizahantany lehibe mivelatra amin'ny 1618 hekitara any amin'ny 175 kilometatra avaratry ny renivohitra Colombo any Kalpitiya nataon'ny governemanta Sri Lankey noho ny fankalazana azy ho toerana mahafinaritra tsara tarehy.
Nanoratra tao amin'ny Groundviews i Raisa Wickrematunge fa mpizahatany mihoatra ny iray tapitrisa no nitsidika an'i Sri Lanka teo anelanelan'ny volana Janoary sy Aogositra tamin'ity taona ity fotsiny. Orinasa izay manome asa ho an'ny olona an'arivony na mivantana na ankolaka izany .
Misy anefa ny porofo fa tsy avela manao ny asa eo amin'ny tontolon'asa fizahantany ny mponina ao an-toerana . Nahita olona maro ao an-toerana i Wickrematunge izay nilaza fa tsy navela hiasa ao amin'ny tontolon'asam-pitsidihana izy ireo. Misy aza tranga sasany tsy avela hanome tolotra mivantana amin'ny mpizahantany, toy ny fitsangantsanganana an-dakana sy fahaiza-mandray vahiny ny olona. Noho izany—tsy mety mandray mpiasa avy ao an-toerana ireo trano fandraisam-bahiny maro tsy miankina sy ireo izay an'ny tafika .
Marihina fa mampiasa vola be manao asam-pihariana ara-pizahantany ny miaramila Sri Lankey. Manana hotely sy toerana fialamboly maro ny tafika , toeram-pisakafoanana maro sy trano fisotroana kafe, ary toerana fizahantany hafa .
Sary torohay natolotry ny Fanentanana Ho an'ny Fandriampahalemana sy ny Rariny ao Sri Lanka .
Araka ny tatitra vao haingana tao amin'ny Global Risk Insights, mampiasa miaramila an-tery mandray karama varimasaka hiasana ao amin'ireo hotely sy toerana fialam-boly izay azy ny tafika. Nahita ny tatitra avy amin'ny Fikambanana Miaro ny Vahoaka Voarahona, mitondra ny lohateny hoe “Dark Clouds Over The Sunshine Paradise” (Rahona Mainty eo Ambonin'ny Paradisa Mamirapiratra) fa miantoka fidiram-bola fanampiny amin'ny alalan'ny sehatry ny fizahantany ny miaramila amin'ny fampiasana miaramila ao amin'ny fizahantany, izay mahatonga azy ho mora kokoa noho ny saran'ny mpifaninana aminy any amin'ny sehatra tsy miankina.
Isaky ny dolara iray lanin'ny mpizahatany ao Sri Lanka, dia misy ampahany manan-danja mankany amin'ny famatsiam-bola ho an'ny miaramila, izay nolazain'ny mpitsikera fa mihoapampana ary tsy misy tokony ilaina izany rehefa tapitra ny ady an-trano. Raha tokony ho ahena ny isan'ny miaramila dia mbola misy miaramila 200.000 miantsona ao amin'ny faritra be Tamil any avaratra , izany hoe efa ho miaramila iray ho an'ny olon-tsotra folo .
Takelaka manambara ny Faritra Fizahantany ao Kuchchaveli. Sary: Groundviews.
Nitarika olana hafa ihany koa ny firoboroboan'ny fizahantany haingana. Mponina maro ao an-toerana no very tanin-drazana tamin'ny fandraisan'ny miaramila sy ireo orinasa tsy miankina an-tanana ny fizahantany, ny ankamaroany manimba ny fiainan'ny vondrom-piarahamonina sy ny kolontsaina any amin'ny toerana tahaka an'i Kuchchaveli, Passikudah, Kalpitiya, Jaffna (ao amin'ny Faritany Avaratra), ary any Panama (any amin'ny distrikan'i Ampara Faritany Atsinanana).
Nizara tantara vitsivitsy avy amin'ireo vondrom-piarahamonina ao an-toerana i Yves Bowie ao amin'ny Groundviews:
Tanànakely fanjonoana ao avaratra atsinanan'i Sri Lanka i Kuchchaveli . Mivelona amin'ny jono sy ny fambolena ny ankamaroan'ny olona. Tamin'ny faran'ny ady, tany maro tao Kuchchaveli no nipetrahan'ny tafika an-dranomasina Sri Lankey. Tsy maintsy nandao ny tranony, ny fiompiana, sy ny faritra fanjonoana ireo mponina. Naniry ny hiverina any amin'ny taniny izy ireo rehefa tapitra ny ady kanefa tsy niala ireo tafika an-dranomasina .
Mpanjono ny ankamaroan'ny mponina sy ny fianakaviany ao amin'ny faritra Passikudah. Nanjono teo amin'ity faritra ity izy ireo sy ny razambeny. Taorian ‘ny nanorenana ny trano fandraisam-bahiny, maro tamin'izy ireo no tsy maintsy nandao ny toeram-piasany. Nalefa tany amin'ny toerana kely dia kely tany an-joron'ny helo-drano ny sambon'ny mpanjono, izay tsy ho ela dia mety tsy maintsy hilaozany ihany koa. Ahiana dia ahiana ny mety ahaverezan'ny fomba fiainan'izy ireo.
Nanoratra ihany koa i Ruki Fernanda sy Herman Kumar tao amin'ny Groundviews:
Tokony hifantoka amin'ny mponina ao an-toerana sy ny mponina lasibatry ny ady ny fizahantany. Zava-dehibe ny fanontaniana azy ireo raha toa ka natao ho famelomana fandriampahalemana, fampihavanana ary fampandrosoana ny fizahantany. Tokony hijery ny fahoriany, ny fanirian'izy ireo ny tetikasam-pizahantany ary manohana ny tolony mikatsaka ny marina, ny rariny ary ny fampandrosoana ara-toekarena amin'ny fomba mety hanohina.
Tsy tokony hanimba na hamotika ny fomba fanaon'ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana na ara-tsosialy na ara-toekarena na ara-kolontsaina ny fizahantany, na hanongotra aminy ny taniny sy ny fivelomany nentim-paharazana. Tsy tokony ahilikilika sy lavina amin'ny tombontsoa ara-toekarena misy izy ireo. [..]
Tsy tokony hampiasa ny fizahantany ho toy ny fitaovana hampiroboroboana ny paikady politikany sy ny fampielezan-keviny ny governemanta sy ny miaramila . Tokony ho tohanana ny fikarakarana toeram-pahatsiarovana sy hetsika fahatsiarovana hafa ataon'ireo vondrom-piarahamonina ao an-toerana ary tokony hanomboka hametraka tsangambato sy mari-pahatsiarovana ofisialy mifantoka amin'ireo sivily sy ireo rehetra izay voakasika ihany koa ny governemanta .
Mpiara-miasa miara-mizara votoaty amin'ny Global Voices ny Groundviews izay tranonkalan'olon-tsotra tia mampita vaovao efa nahazo loka tao Sri Lanka.